Izitshixo zokwenza ukucoca nzulu ekhaya | Bezzia
Izitshixo zokwenza ucoceko olunzulu ekhaya
UToñy Torres | 14/05/2022 16:00 | Ikhaya
Ukwenza ucoceko olunzulu ekhaya ngamaxesha athile kubalulekile ukuba yonwabele intlalo-ntle ebonelelwa likhaya elicwangcisiweyo nelicocekileyo. Kwakhona kuba yeyona ndlela ilungileyo yokugcina indawo nganye eyenza ikhaya ixesha elide. Ekubeni, kungakhathaliseki ixabiso layo lezoqoqosho, ngokunyamekela kakuhle izinto zakho zinokuhlala zikwimeko entle ixesha elide.
Ukwenza ucoceko olunzulu kufuneka ucinge ngaphaya kwemisebenzi eqhelekileyo, kuba ayikuko ukutshayela okanye ukukhuhla kancinci ngakumbi. An indlela yokucoca elungileyo ibandakanya ukususa ifenitshala kude, zihlambulule iindawo ezingabonakaliyo, zilahle ezo zinto ezingasasebenziyo okanye zihlaziye izinto zokuhlobisa ezinceda ukubona indlu ihle kakhulu.
1 Izitshixo ezi-4 zokucoca nzulu
1.1 Ulungelelwaniso lwempumelelo enkulu
Izitshixo ezi-4 zokucoca nzulu
Ulungelelwaniso sisitshixo sempumelelo, kule nto nakuwuphi na umsebenzi ekufuneka uwenze. Ngaphandle kocwangciso olululo yonke into iba ngumbhodamo, ithatha ixesha elide kwaye ngokuqinisekileyo iba ngumsebenzi oyindinisa osoloko ushiywe ngelinye ixesha. Ngoko, qala ngokwenza uluhlu lwezinto eziza kwenziwa apho uya kubhala phantsi izinto ezibalulekileyo, ezo zingacocwanga rhoqo njenge-attic yefenitshala, iidrowa okanye emva kwezixhobo zombane.
Lungiselela zonke izinto zokucoca oza kuzifuna ukuze ungabi nayo yonke into esandleni kwaye ungachithi ixesha xa uqala la limpieza. Ukufumana isikhwama esikhulu senkunkuma siya kukunceda ukuba ulahle yonke into eqokelelana kwiidrowa kwaye ayisekho luncedo. Ngokumalunga neemveliso zokucoca, awudingi ukusebenzisa imveliso kuyo yonke into, ngamanzi, i-detergent, iviniga emhlophe yokucoca kunye ne-baking soda iya kuba ngaphezu kokwaneleyo. Ngoku ukuba sinamalungiselelo angaphambili, makhe sibone ukuba zeziphi izitshixo zokucoca nzulu.
Ulungelelwaniso lwempumelelo enkulu
iidrowa: Khupha idrowa mbuzo kwaye ilahla izinto zayo phantsi. Coca i-drawer ngamanzi afudumeleyo kunye ne-detergent kwaye ngelixa isomisa, lahla into engenamsebenzi. Ngale ndlela uya kuchitha ixesha elincinci lokucoca kunye nokulungelelanisa iidrowa.
Susa ifenitshala: Emva kwefenitshala ubuninzi bokungcola buqokelela, kunye naphantsi kwabo, kuba ziindawo zokufikelela kunzima. Ukufezekisa ukucoca okunzulu kubalulekile ukusebenza kwezi ndawo. Khulula ifanitshala ukuze inobunzima obuncinci, yisuse kwaye uhlambulule udonga olufihliweyo, umgangatho ophantsi kwefenitshala kunye nomqolo womthi ngokwawo.
Udonga: Isenokungabonakali ngeso lenyama, kodwa iikona zeendonga kunye nesilingi ziqokelela uthuli, izinambuzane, iintambo zesigcawu kunye nazo zonke iintlobo zenkunkuma. Ukushiya iindonga zibukeka zintsha, kufuneka ubeke ilaphu le-microfiber kwi-broom ecocekileyo. Susa uthuli kunye nentsalela, ekugqibeleni udlulise ilaphu elimanziswe ngamanzi kunye neviniga emhlophe ukukhusela izinambuzane ukuba zingasondeli kuloo ndawo okwethutyana.
Izixhobo zasendlini: Ukuzigcina zicocekile kubaluleke gqitha kuba ziyinxalenye yekhitshi, apho kulungiselelwa ukutya yonke imihla. Kodwa ngamaxesha athile kuyimfuneko ukucoca ngokucokisekileyo ukufikelela kwezo ndawo zingafikeleleki lula. Khupha isixhobo, sicoce ngasemva, kunye nomgangatho kunye nodonga olufihliweyo. Ukuqhaqha iziqwenga, ngokufutshane, yenza ukucoca ngokucokisekileyo ukushiya izixhobo zombane njengento entsha.
Ukucoca ngokucokisekileyo ekhaya kuthatha ixesha, kungakhathaliseki ukuba uyigcina kangakanani na indlu isexesheni. Yiyo loo nto kufuneka thatha lula kwaye unikezele usuku kwindawo nganye. Ngale ndlela awuyi kuphazamiseka ngokuchitha ixesha elininzi uvaleleke ekucoceni ekhaya. Jonga ikhalenda kwaye ucwangcise usuku olunye ngeveki ukuze uzinikele ekucoceni nzulu indawo ethile. Yaye khumbula ukuba, ukucoca indlu yimbopheleleko yabo bonke abahlala kuyo. Musa ukuzithwalisa nzima ngawo wonke umsebenzi, cwangcisa imisebenzi kwaye ke nonke niya kuthatha ixesha elincinci ukuba nishiye indlu egqibeleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ikhaya » Izitshixo zokwenza ucoceko olunzulu ekhaya
Kutheni kubaluleke kakhulu ukufudumala kunye nokwelula xa usenza imidlalo?
I-anemia: ezinye iimpawu omele uziqaphele